Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee HomeKit ee Maalinka Amazon Prime Prime | Wararka IPhone
Waxaa jira wax ka yar 24 saacadood ilaa maalinta Amazon Prime Day dhammaato, iyo haddii aad weli haysato kaarka deynta oo leh dheelitir, waa fursad aad u fiican oo lagu helo qalab ku habboon barnaamijka madadaalo ee Apple, HomeKit. Ama in lagu bilaabo demoqoti, ama in la buuxiyo buugga aaladda casriga ah ee gurigaaga, dalabyadan way adag tahay in la iska caabiyo.
Waxaan kuu soo bandhigaynaa dalabyada ugu fiican ee aad ka heli karto Amazon inta lagu jiro maalintani koowaad. Degdeg sababtoo ah saacado kooban ayaa hadhay ka dibna qiimaha agabkan ayaa caadi ku soo noqon doona, markaa ha ka qoomameyn berri wixii aadan maanta qaban.
Waa mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee soo saarista nalalka casriga ah, ee la jaan qaadaya HomeKit iyo aalado kale sida Amazon Alexa. SNalalkayagu waa tayo aad u fiican, oo leh xoog iftiin yar oo aan badnayn u dhigmi kara, iyo qaar ka mid ah xubno runtii qurxin aan caadi ahayn. Intaa waxaa dheer, nalkiisu wuxuu si toos ah ugu xiran yahay shabakadda WiFi, iyada oo aan loo baahnayn in xoog la saaro. Kuwani waa dalabyada ugu fiican:
LIFX Multicolor LED guluubka 11W € 34,99 (isku xirka)
LIFX Mini Multicolor LED Nalka 9W € 29,99 (isku xirka)
LIFX Beam Midab Midab Badan € 149,99 (isku xirka)
habeen hore (oo hore loo yiqiin elgato) waa summad loogu talo galay soosaarida qalabka 'HomeKit' ee ku habboon dhammaan qaybaha oo dhan: dareemayaal heerkul ah, fiilooyin caqli badan, laydh, xargaha korontada, waraabka beeraha ... Kuwani waa dalabyada ugu fiican ee alaabtooda.
Eve Energy (fiilo smart) € 34,99 (isku xirka)
Habeenkii albaabka iyo daaqada (dareeraha albaabka iyo daaqada furitaanka) € 26,85 (isku xirka)
Qolka Habeenkii (kormeerka tayada, heerkulka iyo huurka) € 68,99 (isku xirka)
tadoº waa soo saare ku jira buugyaraha ay ku jiraan heerkulbeegyo kala duwan oo loogu talagalay kuleylka iyo xakameynta qaboojiyaha. Moodooyinka HomeKit ee ku habboon ayaa lagu iibiyaa Maalintan Koowaad qiimo aad u soo jiidasho leh.
tadoº Smart Thermostat ee kuleylka € 129,99 (isku xirka)
tadoº Xakamaynta Qaboojinta € 69,99 (isku xirka)
Nooca asaasiga ah ee nalka casriga ah. Way adag tahay in wax laga xusho buugga ay ku qoran tahay, maxaa yeelay waxay leedahay xirmooyin badan oo kala duwan, buundooyinka, noocyada kala duwan ee nalalka, laambadaha ... waxa ugu fiican ayaa ah inaad si toos ah ugu tagto buuga ay ku qoran yihiin oo aad doorato midka aad rabto (isku xirka)
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Heshiisyada HomeKit ee ugufiican maalinta Amazon Prime Day
Cilad ku jirta macruufka 13 waxay siinaysaa marin u helka dhammaan isticmaaleyaasheena iyo ereyada sirta ah